Laba Tareen oo Isku-Duwaha Bangladesh: 15 dhintay, 58 Dhaawacmay | RayHaber
HomeDUNIDAAasiya880 BangladeshLaba Tareen oo isku-urursaday Bangaladesh: 15 dhintay, 58 Dhaawacmay
13 / 11 / 2019 880 Bangladesh, Aasiya, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline, VIDEO
Laba Tareen oo isku-urursaday Bangaladesh: 15 dhintay, 58 Dhaawacmay; 03.00 darajooyinka waqtiga maxalliga ah ee habeenkii hore ee Bangladesh, tareenka rakaabka ah ee ka tagaya Chittagong ee Brahmanbaria, bariga Dhaka, wuxuu isku dhacay tareen kale oo rakaab ah oo ka yimid jihada ka soo horjeedda, dadka 15 ayaa la dilay halka 58 ay ku dhaawacmeen.
Iyaga oo ka imanaya Sylhet kuna sii jeeday Chittagong, tareenka ayaa ka gudbay xarunta tareenka ee magaalada Kosba kuna sii jeedda xarunta Mondovag. Tareenka kale ee rakaabka ah oo ka yimid Chittagong ilaa Dhaka wuxuu ku socday wadada Mondovag. Miiska koontaroolka ayaa weydiistay tareenka inuu ka gudbo tareenka kale oo halkaas ku istaago. Si kastaba ha noqotee, tareenka ka imanaya Chittagong ma raacin tilmaamaha. Daqiiqado kadib, tareenka ka yimid Chittagong wuxuu ku dhacay tareenka Sylhet.
Shilka kadib, dadka 15 ayaa la dilay ugu yaraan dad 58 ah ayaa dhaawacmey. Rakaabkii dhaawacmay ayaa la geeyay Isbitaalka Kosba, eheladooda dhibanayaasha oo ilmada gobolka ka jira ayaa war wanaagsan ka sugaya saraakiisha daqiiqado gudahood. Wadada Tareenka ee Bangladesh ayaa sheegtay in tirada dadka dhintey ay kordhin karto.
Taliyaha booliska gobolka Anisur Rahman ayaa ka warbixiyay baaritaan ku saabsan shilka.
Tareenka 2 ayaa isku dhacay Alexandria! 36 ayaa dhintay, 123 dhaawacmay!
5 ayaa ku dhintay, 10 dhaawacmay, waxaa isku dhacey baabuur tuugsanaya Mexico
1 Dhimashada Tareenka Laba Tareen ee Barcelona
Laba Rakaab oo Tareen ah ayaa ku soo duulay Awstaria 1 Dhimasho, 22 Injured
15 Xadhiga Dhaawaca 40 ee Dhaawacmay
Tareenka Rakaabka ah iyo Isku Socodka Tareenka Xamuul ee Jarmalka 2 waa dhintey…
1 Dhimashada 8 Ayaa Loogu Gubay Laba Tareen Tababare ah oo lagu qabtay Brazil
Laba tareen ayaa ku dhacay Switzerland! 30 dhaawacmay
Laba tareen ayaa ku dhacay Austria, 4 dhaawac halis ah 20
Laba Tareen Ayaa La Garaacay Peruda 23 Injured
Laba Tareen oo Ku Duulay Talyaaniga: 50 Dhaawacmay
Baabuur waddo Tareen isugeyn heer Tarsus ah
Basku wuxuu isku dhacay jidka tareenka Ruushka! 19 Dhimasho
Masaarida Masaarida Masaarida Masaarida 9
Laba Tareen oo ku Dukaamay Bangladesh